Rim yezixhobo zokwakha, iOem OTR iMinerim Rim, OTR Rim - Hywg
Iimveliso ze-HYWG ziye zavavanywa kakuhle kwaye kwangqinwa ngabathengi abakhulu be-OEM njengoMqolomba, uVolvo, uJohn Deere kunye neXCMG.
ORim Rim amacandelo China OEM umenzi 25 ...
Rim forklift for Linde kunye BYD China OEM manufa ...
Ukusebenza okuphezulu kweHitachi Ev 5-Pc Side Ring - O ...
Abathengisi abaThengileyo abaLungileyo 36.00-25 / 1.5 Ityala le-Otr 5 -...
Iqela lamavili laseHongyuan (HYWG) lasekwa ngo-1996 kunye nomanduleli walo njengo-Anyang Hongyuan Steel Co., Ltd (AYHY). I-HYWG ngumenzi wobungcali wezinto ezingqonge irim kunye nongqameko olupheleleyo kuzo zonke iintlobo zoomatshini abangaphandle kwendlela, ezinje ngezixhobo zokwakha, oomatshini bemigodi, iifolokhwe, izithuthi zeshishini.
Emva kweminyaka engama-20 yophuhliso oluqhubekayo, i-HYWG iye yaba yinkokeli yehlabathi kumacandelo omhlaba kunye neemarike ezipheleleyo, umgangatho wayo uqinisekiswe yi-OEM Caterpillar, iVolvo, uJohn Deere kunye ne-XCMG. Namhlanje i-HYWG ine-asethi engaphezu kwe-100 yezigidi zeedola, abasebenzi abali-1100, amaziko amahlanu okuvelisa ngokukodwa i-OTR 3-PC kunye ne-5-PC rim, umda we forklift, irim yoshishino, kunye nezinto zerim.
I-HYWG ngoku ngumvelisi omkhulu we-OTR e-China, kwaye ijonge ukuba ngumenzi ophezulu we-3 OTR emhlabeni.
I-HYWG ivelisa zombini iirim yentsimbi kunye nerim epheleleyo, sivelisa yonke into esendlwini kuzo zonke iirim ezingaphantsi kwama-51 ”.
36.00-25 / 1.5 Liebherr Otr 3-Pc Rim yoMhleli, 14.00-25 / 1.5 Liebherr Otr 3-Pc Rim usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows, Iringi esecaleni, Isitshixo soMqhubi, I-36.00-25 / 1.5 I-Liebherr Otr 3-Pc Rim ye-Hauler echaziweyo, Esisangqa,